Ilwad Elman iyo Hooyadeed oo lasiiyay Abaal-marin | KEYDMEDIA ONLINE
Ilwad Elman iyo Hooyadeed oo lasiiyay Abaal-marin
Ilwad Elman Cali iyo hooyadeed Fartuun Aadan ayaa lagu guddoonsiiyay waddanka Jarmalka Abaalmarin ay la socoto lacag deeq ah oo gaareysa $1 million.
Fartuun Adan (midig) iyo Ilwad Elman, hooyada iyo gabadha ayaa loo magacaabay ku guuleystaha sanadkan
MUNICH, Germany - Ilwad Elman waa gabar fir-fircoon iyada iyo hooyadeed waxaa si wada jir ah loo guddoonsiiyay abaalmarin caalami ah oo ay bixiso Hay'adda lagu magacaabo German Africa Foundation, waxaana abaalmarintan loogu yeeraa " German Africa Prize 2020".
Sida Keydmedia Online ay hore usoo qortay, Sanadkan 2020 waxaa si rasmi ah abaalmarinta ugu guuleystay Hooyo Fartun iyo gabadheeda Ilwad doorkooda ku aaddan ka qeyb qaadashada Baraarugga Aadanaha 2020.
"Mararka qaar, waa inaad mar labaad ku laabataa waddankaaga, iyadoo aan loo eegin halis halkaa ka jiri karta". Taasi waa falsafadda ku guuleystayaasha Abaalmarinta Aurora ee
Baraarugga Aadanaha 2020, taas oo ay la socoto $ 1 milyan oo deeq lacageed ah.
Ku guuleystayaasha abaalmarinta sanadkan Fartun iyo gabadheeda waxay kasoo jeedaan Soomaaliya, kaddib markii la dilay Aabe Elman oo ay u dhaxday hooyo Fartuun ku guuleystaha sanadkan, waxay iyada iyo saddexdeeda gabar (Almas, Iman & Ilwad) ee ay dhashay u carareen dalka dibaddiisa, waxayna magan-gelyo ka heleen waddanka Canada, midkamida gabdhihii ay dhashay Fartuun ayaa Soomaaliya kusoo laabatay waxaana lagu toogtay gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo ay ilaalo ka hayaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda Soomaaliya sidoo kalena ay qeyb ka daggan yihiin Xerada Xalane ciidamao shisheeye, kuna yaalaan safaaradaha waddamo dhowra, taasina kama aysan niyad jabin in ay kasii shaqeeyaan oo ay gargaar la gaaraan dadka nugul ee caruurta iyo waayeelka isugu jira.
"Dagaal oogayaashii dalka way qabsadeen waxayna ku yiraahdeen marar badan waa inaad joojisaa shaqada aad qabanayso," ayey tiri Fartuun, iyada oo dib u xasuusaneysa sheekadii ninkeeda. Xilli maleeshiyooyinka ay adeegsanayeen askarta caruurta, ayay tiri, "Waxaan soo bandhignay fursado aan ku caawin karno, xagga waxbarashada, tababar xirfadeed, shaqooyin, wuxuu sidoo kale bilaabay naadi kubadeed oo wali dhisan kaasoo lagu magacaabo Naadiga K.C. ELMAN."
Xarun loogu magac daray Elman Peace and Human Rights Center ayey ka hirgaliyeen Fartun iyo ninkeeda Elman sanadkii 1990. inkastoo ay waddanka oo dhan isaga carareen haddan Fartuun waxay dib ugu soo laabatay Soomaaliya sanadkii 2006 si ay usii waddo shaqadii uu ninkeeda billaabay ee gargaarka bani'aadanimada.
Ilwaad iyo hooyadeed waxay sheegeen in Abaalmarintan ay kusii qasbeyso in ay sii wadaan shaqada ay u hayaan bulshada, weliba intii hore in ka dheeri ah. Abaalmarinta ayaa sidoo kale xoojineysa ballanqaadkooda geeridii ku timid Almaas Elman. "Mid ka mid ah waxyaabaha naga caawiyay inaan bogsano waa inaan ula noolaano hadaf iyo mahadnaq maalin walba," ayay tiri Ilwad. Ilwad ayaa sii raacisay hadalkeeda "Abaalmarinta waa sharaf weyn waxayna la timid mas'uuliyad," ayey tiri Ilwad. Kaliya maahan in naloo aqoonsado, waxay na awood siineysaa inaan la shaqeyno ururada kale, inaan horey u sii wadno oo aan ka caawinno dadka kale inay sii wadaan isla sidaas oo kale.